· Maitso sy lokon-kazo
Mampatsiahy avy hatrany ny natiora ny fanambarana ireo loko roa ireo. Azo asiana fotsy ihany koa miaraka aminy ka ao amin’ny efitra fandriana no tena tsara lokoina amin’izy ireo. Azo atao ihany koa ny mampiaraka ny maitso sy ny loko mavokely, ao amin’ny efitra fandriana ihany.
· Maitso sy volom-parasy
Mifameno ireo loko roa ireo ka izay no mampety ny fampiarahana azy. Ao amin’ny efira fandraisam-bahiny no azo lokoina aminy na eo amin’ny lalan-tsara mihazo ny efitra fandraisam-bahiny, ihany koa.
· Maitso sy ny maitso
Ankoatra ireo dia tsara ihany koa ny mampiaraka ny maitso sy ny maitso saingy loko tsy mitovy kosa no ampiasaina. Ny maitso lomotra sy ny maitso tanora ohatra, handoakoana birao.